कोटेश्वर–कलंकी सडक बिस्तार अन्तिम चरणमा, धूलो र जामको समस्याबाट मुक्ति !
ललितपुर, २८ पुस– तपाई कलंकीको जाममा कतिपटक पर्नुभएको छ ? एक दुई वा त्योभन्दा बढी पनि हुनसक्छ । यदि तपार्इं काठमाडौँ उपत्यका बाहिर ओहोरदोहोर गरिरहनुहुन्छ भने दशौँपटकसम्म पनि जाममा पर्नुभएको हुनसक्छ । तर अब भने त्यो समस्याबाट भुक्ति पाउनु हुने भएको छ ।
यो सडकखण्डमा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी काम सकिएको काठमाडौँ चक्रपथ सुधार योजनाका इञ्जिनियर निरञ्जन शर्मा अर्यालले बताए । उनका अनुसार कोटेश्वरदेखि धोबीघाटसम्मको साइड लेनको कालोपत्र गर्ने कार्य सकिएको छ । रेटेनिङ वाल, सवारी कुद्ने पुल र आकाशेपुल निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । केही ठाउँको कार्य भने अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
‘कोटेश्वरदेखि धोबीघाटसम्म दुवैतिर मुख्य लेनमा कालोपत्र गर्ने कार्य भइरहेको छ । खसीबजारदेखि कलंकीसम्मको ‘अण्डर पास’ को काम पनि भइरहेको छ । फुटपाथ र सर्भिस मार्गको काम अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘तीव्र गतिमा काम भइरहेकाले केही समयमा नै सकिनेछ ।’
चिनियाँ सरकारको सहयोगमा निर्माणाधीन यो सडक निर्माणको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी सङ्घाई कन्स्ट्रक्सन गु्रपले पाएको छ । पछिल्लोपटक भएको सम्झौताअनुसार आगामी जुलाईसम्म यसको निर्माण कार्य सक्नुपर्ने हुन्छ । ‘भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण यसका निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न एक वर्षको अवधि थप गरिएको थियो,’ इञ्जिनियर अर्यालले भने, ‘अब जुलाईमा नै सक्ने गरेर काम अघि बढेको छ ।’
यो परियोजनाको निर्माणका काममा पूरै प्राविधिक जनशक्ति चिनियाँ नागरिक नै छन् । अदक्ष कामदारमा भने नेपाली र चिनियाँ दुवै छन् । यो सडकखण्डको निर्माणमा करिब ६० जना नेपाली र २०० चिनियाँ कामदार खटिएका छन् ।
पाइप लाइन, विद्युत्का पोल, सडक छेउका घर टहरालगायतका कारणले गर्दा काममा भने केहि ढिलाइ हुने गरेको छ । सडकमा बिच्छ्याइएका मेलम्ची र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका पाइप समय–समयमा सडकले गर्दा फुट्ने गरेको छ । ‘सातदोबाटो, खसीबजार, महालक्ष्मीस्थानमा सडक छेउमा घर–टहरा छन् । आठ लेनको सडकको बाहिर पर्ने सर्भिस सडक पर्ने ठाउँमा भएका यी घर–टहराले गर्दा काम अघि बढ्न सकेको छैन,’ इञ्जिनियर अर्यालले भने, ‘हामीले पटक–पटक भन्दा पनि स्थानीयवासीले घर भत्काउन अटेर गरिरहेका छन् ।’
मुख्य लेन, सहायक मार्ग र सर्भिस मार्ग गरेर १० लेनको सडक निर्माण भइरहेको हो । चक्रपथ छिर्ने विभिन्न सडकहरु यो सडकखण्डमा पर्छ । यी सडकमा चक्रपथ बाहिर निस्कने सडक कुन निकायले कालोपत्र गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । परियोजनासँग यी सडकमा काम गर्ने सम्झौता थिएन । ‘यी सडक नसुध्रँदा त्यसको असर सडक निर्माण पछि पर्नेछ,’ उनले भने, ‘यी सडक कच्ची हुँदा नयाँ सडकमा समेत धुलो र हिलो फैलनेछ ।’
श्रम स्वीकृति लिन जानेहरूलाई भेडाबाख्राको जस्तो व्यवहार ! कवि भूपी शेरचनले ‘मेरो चोक’ शीर्षकमा एउटा कविता लेखेका थिए । मलाई अहिलेसम्मको सबैभन्दा मन परेको, मन छोएको कविता नै यही हो । यो कविताको एक हरफमा बडो दिलचस्पी जगाउने भाव छ...
राजनीतिक परिवर्तनलाई न्यायक्षेत्रले साथ नदिएको प्रचण्डको टिप्पणी
अमेरिकाका इन्टिरियर सेक्रेटरी र्‍यान जिन्केले पदत्याग गर्ने
समृद्ध नेपाल बनाउन खेलकूद अपरिहार्य : मन्त्री विश्वर्कमा
पाल्पा : नेकपाले सबै स्थानीय तहमा अध्यक्ष र सचिवको टुङ्गो लगायाे